Kwiselulosi kaEtere Factory - China kwincindi yesetyu abavelisi, abaxhasi
1. I-HEMC hydroxyethyl methyl cellulose yenziwa kwi-cellulose ecocekileyo yomqhaphu. Emva konyango lwealkali kunye ne-etherification ekhethekileyo iba yi-HEMC. Ayinawo nawaphi na amafutha ezilwanyana kunye nezinye izinto ezisebenzayo.
2. Imbonakalo ye-HEMC ngamasuntswana amhlophe okanye umgubo, awunantsingiselo kwaye awunancasa. I-hygroscopic kwaye ayinakunyibilika emanzini ashushu, i-acetone. i-ethanol kunye ne-toluene. Emva kokudumba emanzini abandayo kwisisombululo se-colloidal, ukunyibilika akuchaphazeleka lixabiso le-PH. Kuyafana ne-methyl cellulose, kodwa ngokunyuka kwamaqela e-hydroxyethyl, inokunyamezelana ngakumbi, inyibilika ngokulula emanzini kwaye ineqondo lobushushu eliphezulu lokuncipha.
1. IMODECELL HEC inentsebenzo yokumiswa okuhle, ukuxuba ukufana kokusebenza kokuqina kunye nokunye ...
2. IHydroxyethyl cellulose, ineepropathi ezinokuthenjwa malunga nokukhuthaza ubukhulu, i-emulsification, ukunqunyanyiswa, ukusasazeka, ukudibana, ukugcina ukufuma kunye nomsebenzi wokuchasana neentsholongwane.
3. ILongou Co, Ltd okwangoku sisiseko semveliso esikhulu se-HEC ekhaya, iqumrhu linokubonelela ngonyango olunganyangekiyo nolunganyangekiyo. I-HEC eyahlukeneyo inee-viscosities ezininzi, ezifumana isoftware ebanzi yokumiswa kwesicelo, i-foam ekwaziyo ukwenza i-polystyrene, i-emulsion kunye nohlobo olutsha lwe-acrylic resin emulsion paint, ipeyinti enemibala, ukusetyenziswa kweekhemikhali zemihla ngemihla kunye namasebe anje ngokugrumba kumabala eoyile, izinto zokwakha. Ukubonelela ngepropathi elungileyo kukhuthazo lobukhulu, i-emulsification, ukunqunyanyiswa, ukusasazeka, ukugcina ukufuma kunye nomsebenzi we-anti-microbic.